The Galaxy Fold 2 ga-abata na agba ọhụrụ abụọ na enweghị S-Pen | Gam akporosis
The Galaxy Fold 2 ga-abata na agba ọhụrụ abụọ na enweghị S-Pen
Na February gara aga, anyị kwughachiri akụkọ akụkọ na-ekwupụta na ọgbọ na-esote nke Galaxy Fold, ga-etinye S-Pen nke Galaxy Note, asịrị nke ga-ejide ya na tweezersEbe ọ bụ na ọ bụ ụdị nke Galaxy Fold (ọ bụghị nke isiike), ọ nweghị isi.
Asịrị ndị kachasị ọhụrụ metụtara ọgbọ nke abụọ nke Galaxy Fold na-atụ aro na S-Pen agaghị anọ. Dị ka ụlọ ọrụ mgbasa ozi Korea dị iche iche si kwuo, ihe kpatara ya abụghị na teknụzụ itinye aka n'okpuru ihuenyo, mana Samsung kwesịrị iwelata ibu nke ngwaọrụ ahụ.
Samsung chọrọ iwelata ibu nke ọgbọ nke abụọ nke Galaxy Fold, na-etinye ya na gram 229, ihe dị ka gram 40 dị obere karịa ọgbọ mbụ. Mepụta S-Pen ga-eme ka ụba ngwaọrụ ahụ dịkwuo elu (iji tinye ohere iji chekwaa ya) ya mere, ibu nke S-Pen ga-agbakwunye ga-abawanye. Mana nke a abụghị naanị asịrị metụtara Galaxy Fold 2.
Dabere na mgbasa ozi Korea, Samsung chọrọ gbasaa usoro agba nke ọgbọ nke abụọ a. Anyị na-ekwu maka agba Martian Green na Astro Blue, agba ndị nwere ike ọ gaghị adị na mba niile, na-agbaso amụma Samsung na nnweta agba.
Agba Martian Green na Astro Blue, Ebu ụzọ mee ọgbọ mbụ nke Galaxy Fold, ma a jụrụ ha na njedebe ikpeazụ n'ihi nsogbu na ihuenyo nke ọnụ ahụ tara ahụhụ n'ọgbọ ahụ tupu mmalite ya, nsogbu ndị mere ka ụlọ ọrụ ahụ gbuo oge ọbịbịa ya n'ahịa ruo na njedebe nke afọ.
N'ụzọ dị otú a, n'ihi igbu oge na mwepụta nke ọgbọ mbụ Fold, Samsung belatara katalọgụ ya na naanị abụọ: Space Silver na Cosmos Black. A na-ahazi ụbọchị ngosi ngosi nke Galaxy Fold 2 maka August 2020, n'otu ihe ngosi ngosi nke Galaxy 11/21.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » The Galaxy Fold 2 ga-abata na agba ọhụrụ abụọ na enweghị S-Pen